Mapurisa kuMarondera anonzi ashandisa pfuti kurambidza mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa kudyara miti pazuva reNational Tree Day.
Bato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa rinoti mapurisa aridzira pfuti mutungamiri waro paanga achidyara miti kuMarondera mudunhu reMashonaland East, pahurongwa hwavo hwekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika, reNational Tree Day.
Mutauriri waChamisa, Doctor Nkululeko Sibanda vanoti mapurisa aya ashandisa mabara anouraya pamwe nemabara erhabha nehutsi hunokachidza mukuda kuparadza vanhu vanga vaungana paDombotombo Clinic, apo VaChamisa vanga vachidyara miti.
VaChamisa vakatara mwedzi wese waZvita semwedzi wekuti vanhu munyika yose vange vachidyara miti senzira yekudzivirira kuparara kwenyika kunonzi nenyanzvi kuri kukonzerwa nekutemwatemwa kwemiti.
VaChamisa vanonzi vadyarawo miti pamahofisi ekanzuru yeMarondera vasati vaenda paDombotombo Clinic.
Doctor Sibanda vanoti sezvo vanga vasiri kuita musangano, vanga vasingafanirwi kutanga vatsvaga mvumo yemapurisa yekuti vaungane vachidyara miti.
Vanoti mapurisa amanikidzwa kutora danho iri kuparadza vanhu vanga vaungana vasina mvumo yemapurisa, avo vavanoti vanga vave kuda kuita zvemhirizhonga vachiimba.
Assistant Commissioner Nyathi vanoti zvakakosha zvikuru kuti vanhu vese, kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika, kuti varemekedze mitemo yemunyika.